Lixabiso Drawing aluminium ingxubevange extruded iindawo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Inkqubo yokuzoba umphezulu wealuminium alloy
Umzobo wocingo ochanekileyo
Kubhekiswa kwimitshini yemigca ethe nkqo kumphezulu weplate yealuminium ngokukhuhlana koomatshini.
Inomsebenzi ophindwe kabini wokususa imikrwelo ebusweni beplate yealuminium kunye nokuhombisa umphezulu weplate yealuminium. Zimbini iintlobo zocingo lwentambo oluthe tye: ucingo oluqhubekayo kunye nocingo oluphakathi. Iipateni eziqhubekayo zomsonto zingafunyanwa ngokujija iiphedi okanye iibrashi zentsimbi engenasici ngokuhambisa okuthe nkqo ngokuthe tyaba kumphezulu weplate yealuminium (njengokugaya ngesandla phantsi kwesixhobo esele sikhona okanye ukusebenzisa isicwangciso sokubamba ibrashi yocingo kwipleyiti yealuminium) . Ngokutshintsha ubukhulu beengcingo zebrashi yentsimbi engenasici, uburhabaxa bokuqina okuhlukeneyo kuyafumaneka. Iipateni zesilika ezingapheliyo zenziwa ngokubanzi koomatshini bokuxubha okanye koomatshini bokurabha. Imigaqo yokuvelisa: Kusetyenziswa iiseti ezimbini zamavili ahlukileyo ajikelezayo kwicala elinye. Iseti ephezulu iroli yokugaya ejikelezayo ngokukhawuleza, kwaye iseti esezantsi irola irabha ejikelezayo. I-aluminium okanye i-aluminium alloy ipleyiti idlula kwiiseti ezimbini zeeroli kwaye ikhutshiwe ngaphandle. Imigca ethe nkqo ethe tyaba.
Ukuzoba ipatheni engaqhelekanga
It is a irregular, non-obvious matte silk pattern found by moving and rubbing the aluminium plate back and forth under a high-speed wire wire brush. Olu hlobo lokuqhubekeka luneemfuno eziphezulu kumphezulu wealuminium okanye ipleyiti yealuminium.
Ngokubanzi, yenziwa kumatshini wokuxubha okanye kumatshini wokurabha. Sebenzisa intshukumo yezihlunu zeqela eliphezulu lokugaya izileyi zokubrasha kumphezulu wealuminium okanye ipleyiti yensimbi yealuminium, Zoba ipateni yomtshangatshangiso.
Ikwabizwa ngokuba kukujikeleza kwe-optical, olu luhlobo lwephatheni yesilika olufunyenwe kusetyenziswa ivili lokuthambisa okanye lokugaya ivili yenayiloni ukuyifaka kumatshini wokugrumba, ukudibanisa ipolishi yeoyile kunye neparafini, kunye nokujikeleza kunye nokupolisha umphezulu wealuminium okanye ipleyiti yealuminium. Isetyenziselwa ukuhombisa imiqondiso ejikelezileyo kunye nedayali ezincinci zokuhombisa.
Isebenzisa imoto encinci ejikeleze ishafti kwaye iyilungise etafileni, malunga ne-60 degrees ukusuka kumda wetafile.
Ukongeza, ipallet exhotyiswe ngeplastikhi yealuminium iti yokucinezela yenziwa, kunye nefilimu yepholiyesta eneziphetho ezichanekileyo incanyathiselwe kwipallet ukunciphisa ukhuphiswano lomsonto. Sebenzisa ukujikeleza kokuziva kunye nentshukumo yokuhamba yenqwelomoya, ipatheni yomsonto enobubanzi obufanayo ikhuhlwe kumphezulu weplate yealuminium.
Indima yomzobo wocingo lwealuminiyam
Iziphumo ezifunyanwa ngumzobo wocingo ziya kuba nesiphumo esihle kakhulu se-convex kunye ne-concave. Umzobo wocingo yinkqubo yokulungisa. Kuba kukho imikrwelo kumphezulu wesinyithi, sebenzisa umatshini wokuzoba ucingo ukwenza imikrwelo engaguquguqukiyo kumphezulu wonke (ukunciphisa ubukhulu bodonga) - ukugubungela ukukrwela, kungcono ukuba (kusetyenzwe emva kokuqaqanjelwa komsebenzi, kuya kutshintsha intsebenzo). Kodwa imikrwelo kunzima ukuyiphepha, ke ihlala isetyenziswa. Ukuzoba kungekuphela nje iibrashi ezikrwada ebusweni beplate yealuminium, kodwa ikwanesiphumo sokuhombisa imbonakalo yeplate yealuminium. (Kukwakhona nenkqubo "yokunyathela okushushu" (ukuhanjiswa kwealuminiyam), enokwenza umphumo ofanayo kumphezulu weplastiki.)
Izinto eziphathekayo I-Aluminium, intsimbi engenasici kunye nezinye izinto zetsimbi zinokuxutywa kunye nokucocwa
Ukusetyenziswa Ngokweemfuno zonyango lobushushu ezahlukeneyo
Egqithileyo Umnyama omnyama we-6061-T6 i-aluminium alloy CNC machining parts
Okulandelayo: Amacandelo e-Electroplated aluminium alloy